Antony, mila olom-baovao ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) mba ahafahana mitondra fijery vaovao. Tsy voatery mpanao politika no miaraka amin'ny filoha Andry Rajoelina fa olona mahavita azy no ilaina. Manilika ireo goaika antitra izany ny IRD raha halalinina io. Andrasana izay olona afaka hifaninana amin'ny antoko Tiako I Madagasikara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra. Milaza ho vonona ny IRD amin'ny fifidianana kaominaly sy monisipaly ka tsy maintsy hametraka kandidà manerana ireo kaominina 1695 mba hahazoana ny maro an'isa. Raha ny fantatra anefa, misedra olana ny antoko amin'ny fandaminana izay napetraka ho an'izay ho kandidà noho ny fahamaroan' ireo antoko nanohana ny filoha Rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena.